Khaatumo dagaal uma baahna | Anti-Tribalism
← Munaasabad ALLA BARI ah oo loogu duceeynayay dadkii lagu laayay qarixii TIYAATARKA oo lagu qabtay GOTHENBURG.
Yaa Iska Leh Mas’uuliyada Qaraxii Tiyaatarka?? →
Khaatumo dagaal uma baahna
Abriil 08 2012 – Maamulka Khaatumo wuxuu ku salaysan yahay dood maangal ah: in laga madax-bannaanaado Puntland iyo Somaliland– labo maamul oo isku haysta dhulka beesha Khaatumo samaysatay ay degto. Dooddan kama duwana dooddii xubno badan oo beesha ka mid ah ay soo bandhigi jireen markii ay sheegayeen sababaha ay u kala doorteen Buntland iyo Somaliland. Weydiintu waa: haddii mashruuc siyaasadeed oo ku salaysan abtirsiinyo-wadaag heer Harti uu shaqayn waayay , miyuu shaqayn karaa mid heer Dhulbahante ah? Ma gadh baa in dad badani kala garan waayaan ama iska dhigaan inaysan kala garanayn kala duwanaanta laba arrimood: (1)xaqa dadku u leeyiihin inay noloshooda siyaasadeed maareeyaan iyo (2) saamaynta go’aamada siyaasadeed ee hoggaamiyayaasha. Dhaliisha hoggaamiyayaasha waxay la mid noqotay dhaliisha xaqa siyaasadeed ee beesha. Tani waa sababta siyaasadda reeraysan ay u tahay hooyada keli-talisnimada.
Tusaalooyinku may yara: Somaliland waxay waqti badan siisay aqoonsi-raadin inkastoo dagaallada dhacay ay ka dhasheen go’aamada beeleed iyo cuskashada xeerar aan sal lahayn sida qarannimo ( sovereignty). Haddii hoggaanka dhaqan-siyaasaeed ee Somaliland uu isku raacay colaad, hoggaanka dhaqan-siyaasadeed ee Puntland wuxuu isku raacay inuusan kala dhex gelin siyaasiyiintii reer sool ( Axmed Cabdi Xaabsade iyo Xasan Daahir Afqudhac, madaxweyne ku xigeenkii Buntland) sanadkii 2007dii, ismaandhaafkaas oo qayb ahaan keenay in maamulka Somaliland uu gacanta ku dhigo Laas Caanood. Taas waxa ka horreeyay, go’aankii maamulka Buntland ku gaadhay in ciidamadii fadhiyay Adhicaddeeye loo daadgureeyo Muqdisho si ay uga mid noqdaan ilaaliyayaashii madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka marxuum Cabdulahi Yuusuf inkastoo aan heshiis laga gaadhin dagaalkii Adhicaddeeye ka dhacay sanadkii 2004tii iyo ciidamadii is horfadhiyay.
Sida lagu xusay sirta diblomaasiyadeed ( Wikileaks 24/11/2004) madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka wuxuu rumaysnaa in ismaandhaafka Somaliland iyo Buntland lagu dhammeeyo wada-hadal. Dabayaaqadii sanadkii 2007dii ayuu maamulka Somaliland gacanta-ku-dhigay Laas Caanood. Ciidankii Waqi-darri ka soo galay magaalada ayaa hor dhac u ahaa ciidanka Somaliland; waxa hoggaaminay Dalbac, Dhakool iyo Ina Caydiid Dhadhable. Dhowr toddobaad ka ddib Axmed Cabdi Xaabsade, oohadda wasiir ka ah maamulka Somaliland marse ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee Buntland, baa Laanta af Soomaaliga ee BBCda u sheegay in ciidamada Somaliland, ayaa sheegay in ciidamada Somaliland ay Laas Caanood ku soo galeen doonista dadka reer Laas Caanood. Dadka Buntland taageersan waxay rumaysan yihiin in weerar qabyaaladeed lagu soo qaaday Laas Caanood. Afar sanadood ka dib dagaalkii Kalshaale awgiis, Dalbac baa Laanta af Soomaaliga BBCda u sheegay in markii hore u rumaysnaa labo maamul inay is hayeen, haddase weerar lagu qaaday ” qabiilkayga”. Maxaa loogu baahan yahay in dhacdooyinkan si kooban loo xuso? Waxay noo fududaynaysaa inaannu ogaanno waxa keenay dhibaatooyinka siyaasadeed iyo bulsho. Sidoo kale xusidda dhacdooyinkan waxay noo horseedi lasrtaa inaannu isweydiinno weydiimo sida: maxaa u diiday madax-dhaqameedka iyo siyaasiyiinta Sool inay iska kaashadaan wax ka qabashada ismaandhaafyada keenay dhowr dagaal, dib-u-dhac iyo is-aammin darro? Immisa jeer buu dadku arkay siyaasi ku biiray maamul uu ka horjeeday? Taageeradii Buntland loo hayay waxay keentay in aan su’aalo la iska weydiin sida maamulku u saameeyay nolosha dadka.
Maamul goboleed ku salaysan tolnimada wuxuu ku dhisan yahay awoodda madax-dhaqameedka hase ahaatee marnaba oday dhaqameedyadu kaalin kuma yeeshaan go’aamada siyaasiyiintu qaataan waayo maamulka noocaas oo kale wuxuu u dhexeeyaa habka tolnimada iyo habka dowladnimada, kaalinta madax dhaqameedkuse waxay noqotay sharciyeynta barnaamijyada siyaasadeed waayo way og yihiin in aan odayaasha dhaqameed lagala tashan shaqaalaynta, wax ka qabashada baahida dhaqaale iyo adeeg bulsho kaalintiooda oo ku kooban dhammaynta dhibaatooyinka dhiig ( dil ama dhaawac) iyo dhaqameed ( dhac ama meel-ka-dhac) . Waa sababahan kuwa keena inaysan oday beeleedyadu ka hadlin arrimaha keenay qabsashadii Laas Caanood markii madaxdii Buntland ay ku loollamayeen Garoowe, ( ogow aammusnaantu kama duwana taageeris marka loo baahan yahay in runta la sheego– rag aamusay…..)
Mabaa’dii”da Khaatumo 1
Mabaadii’da ka soo baxay shirkii jaalliyadaha Sool, Sanaag iyo Ceyn oo ka dhacay London sanadkii 2011waxay ku salaysnaayeen dhammaynta dhibatooyinka siyaasadeed oo u dhexeeya beesha hadda samaysatay Khaatumo iyo beelaha kale oo deriska la ah. Miyay reer Khaatumno dejiyeen mabaadii’da iyaga ay ku wada noolaanayaan ka sokow samaysashada maamul? Khaatumo waxay nolol siyaasadeed siisay dad ka mid ah dadkii kaalin toos ah ama dadban ku lahaa dhibaatoyinka in la furdaamiyo la doonayo, waana siyaasaddan midda Khaatumo ka hortaagan inay u howlgasho dib-u-heshiisiin loo abuulo dadka ismaandhaafku kala kexeeyay. Tani waxay keentaa in siyaasiyiintu marba dhinac u cararaan. Weli miyaad aragtay siyaasi yidhi: ‘weligay maamul kale maan taageerayo haddii xilka aan waayo ama haddii beeshaydu wax tabato?’ Beesha Khaatumo samaysatay waxay u baahan tahay inay u guntato dhammaynta ismaandhaafka siyaasadeed oo dhex yaalla beesha. Xusuuuso sidii loogu hawlgalay dhammaynta ismaandhaafkii siyaasadeed marxuum Cabdullahi ysuuf iyo Cadde Muuse dhexmaray. Arrin kale oo xusid mudan: dadku way u fadhiyeen in maamulka Buntland karti u yeesho dhowrista nabadgelyada dadka tageersan sida maamulku u dhowray nabadgelyada dadka taageera maamulka oo deggan meelaha colaad beeleed ka aloosmi karto sida Gaalkacyo.
Dood seddex qaybood leh baa la soo bandhigaa marka laga hadlayo sababaha ka dhigay Sool iyo qeybo ka mid Togdheer jiid dagaal:
1- Ismaandhaafka siyaasadeed iyo ku adeegashada madax-dhaqameedka ayaa keenay in xaqa nabadgelyo iyo horumarin ee dadka dega magaalooyin sida Laas Caanood, Buuhoodle, Taleex, Boocame iyo Yagooori la illoobo
2- Dagaal beeleysan oo lagu qaaday degmooyin dadka doonaya midnimo Soomaaali ay ku nool yihiin baa keenay colaadda hadda taagan
3- Dooda koowaad iyo doodda labaad baa keenay colaadda taagan. Mid waa sabab ( cause) midna waa saamayn (effect)
Shirkii Taleex intuu socday saamaynta labaad baa xoogga la saaray inay noqoto waddada loo marayo abaabulista dadka. Albert Einstein, saynisyahankii noolaa qarnigii hore, wuxuu yidhi ” Haddii aan haysan lahaa hal saac si aan dunida u badbaadiyo, 59 daqiiqadood waxaan ku lumin lahaa qeexista dhibaatada , hal daqiiqadna xal u helista dhibaatada.” Dhibaatooyin si gef ah loo qeexay baa ka buuxa taariikhda siyaasadda Soomaaliyeed. Khaatumo waa inaysan ka mid noqon dhibaatooyinkaas taariikhda galay